यो दशैमा घर आउंदै हुनुहुन्छ? भन्सार नतिरी के कति सामान ल्याउन पाईएला ?? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यो दशैमा घर आउंदै हुनुहुन्छ? भन्सार नतिरी के कति सामान ल्याउन पाईएला ??
यो दशैमा घर आउंदै हुनुहुन्छ? भन्सार नतिरी के कति सामान ल्याउन पाईएला ??
काठमाडौं– दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने ल्याउने विदेशबाट ल्याउँदा कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन। केही सामानको भन्सार शुल्कमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याएमा जफत हुने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९, उपदफा (३) ले २०७७ जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यबस्था गरेको छ।
निम्न सामग्री ल्याउँदा भन्सार शुल्क पूर्ण छुट हुनेछ! लुगाफाटा, बिच्छ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामान औषधि उपचार गराई फर्किएका बिरामीले ल्याएका औषधि शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिले सहाराका रुपमा प्रयोग गरेका सामान ट्याबलेट, ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युरटर, घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेनड्राइभ (बढीमा एक/एक थानसम्म) ल्याउन पाईन्छ !
त्यस्तै बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल (बढीमा एक/एक थानसम्म) पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएका सामान्य प्रकारका सामानहरु (जस्तैः डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने सामान्य यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीका खेलकुदसम्बन्धि सामान जस्तैः ब्याडमिन्टन सेट, फुटबल, भलिबल, गितकार तथा संगितकारको सामान्य बाजा जस्तैः गितार, हार्मोनियम, तबला जस्ता सामाग्रीहरु)। तर यी सामान पनि बढीमा एक एक थान मात्र भन्सार छुटमा ल्याउन पाइन्छ।
”मुन्द्रेको क’मेडी क्लबमा अब दी’पाश्री’को ठा’उँमा करिश्मा”
गा’यि’का टि’का सा’नुले हा’त पा’रिन ब’र्षकै उ’त्क्रि’ष्ट गा’यिका’को अ’वा’र्ड , हा’र्दि’क बधा’ई गा’यि’का टि’का सा’नुला’ई ( भिडियो )